मनीषाको व्यथा र कथा - म मर्न चाहन्नँ | Jukson
काठमाडौँ, पुस ४
‘म मर्न चाहन्नँ।’
मैले छटपटिँदै साथीलाई सन्देश पठाएँ।
मलाई निराशाले भित्रभित्रै खाँदै थियो। अजिंगरले आफ्नो आहारा एक गाँसमै सुलुत्त निलेझैं म अन्धकारको गर्तभित्र भासिँदै थिएँ। बाजको पञ्जामा पन्छी जसरी फड्फडाउँछ, म त्यो निस्पट्ट अन्धकारबाट उम्किन उसैगरी हातखुट्टा फाल्दै थिएँ।
जति नै चलमलाए पनि अन्धकार आफ्नो अष्टबाहु फैलाएर मेरो घाँटी निचोर्दै थियो। मेरो आँखाअगाडि टाढा(टाढासम्म उज्यालो प्रकाशको एक धर्सो पनि थिएन। अन्धकार मेरो कमजोर शरीरलाई आफ्नो पासोमा जकडेर मभित्र प्रवेश गर्दै थियो, एकदमै तीव्र गतिमा। विस्तारै त्यो मेरो शरीरभरि फैलियो। र, पेटको पिँधमा पुगेर मलाई गिजोल्न थाल्यो।
आँखाभरि छाएको अन्धकारमा पनि म अतीतको त्यो क्षण प्रस्ट देख्दै थिएँ, जब मैले पहिलोचोटि आफूलाई परित्यक्त अनुभव गरेँ।
म त्यति बेला दस वर्षकी थिएँ। हामी भारतको बनारसमा हजुरआमासँग बस्थ्यौं। एकदिन मेरी आमा मलाई हजुरआमाकै घर छाडेर अचानक फुत्त हिँड्नुभयो। म आँखा फिँजारेर उहाँ गएको बाटो हेरिरहेँ। मूर्तिवत्।
आमालाई मेरो ममताले तानेर फर्काउला भन्ने मैले कत्रो आश लिएकी थिएँ। कति न पर जानुहोला र१ एक–दुई पाइला त हो नि१ त्यसपछि उहाँ फरक्क फर्केर म नजिक आउनुहुनेछ, र मलाई अंगालो मारेर जुरुक्क आफ्नो काँधमा बोक्नुहुनेछ !
म सोचिरहेँ। आश गरिरहेँ।
अहँ, उहाँका पाइला अडिएनन्। उहाँले फर्केर पनि हेर्नुभएन।
‘तपाईं किन फर्कनुभएन आमारु’ मैले धेरै वर्षपछि उहाँलाई सोधेँ।
‘म मेरी सानी छोरीलाई उसकी आमाको भिजेको आँखा कसरी देखाउन सक्थेँ,’ आमाको जवाफ थियो।
आमा त्यसरी किन जानुभयो भन्ने मैले धेरै समयपछि मात्र बुझेँ। नेपालमा राजनीतिक गतिविधि चुलिएको त्यो समय बुबाको व्यस्तता बढेको थियो। त्यसैमा बुबालाई भर दिन मलाई हजुरआमाको काखमा सुम्पेर जानुभएको थियो।
म एक्ली कहाँ हो र ! नेपालको राजनीतिक उथलपुथलबीच हजुरआमाले परिवारका थुप्रै केटाकेटी स्याहार्नुभएको थियो। उहाँको ममतामयी स्याहारले राजनीतिक बादलको लुकामारी मेरो हुर्काइमा पर्ने छैन भन्ने आमाले राम्ररी बुझ्नुभएको थियो।
मैले आमाको काख गुमाएँ। हजुरआमाको न्यानो काख पाएँ।
आज फर्केर हेर्दा त्यो बेलाको परिस्थिति र मेरी प्यारी आमाको बाध्यता म बुझ्छु। मेरो भविष्यको निम्ति उहाँले जुन बुद्धिमतापूर्ण निर्णय लिनुभयो, त्यसको पनि कायल छु। तर, कलिलो मन र काँचो मस्तिष्कमै आमाबाट परित्यक्त हुनुको जुन छाप अंकित हुन पुग्यो, त्यसलाई कसैगरी मेट्न सकिनँ।
प्रियजनबाट त्यागिनुको त्यस्तै अनुभूति मलाई मेरो विवाह बन्धन चुँडिएपछि भयो। मैले यो सम्बन्ध सकुशल राख्न खुब कोशिश गरेँ। जब धागो चुँडियो, पीडाको बज्रपातले मेरो छाती मात्र होइन, आत्मा नै चिरियो। दोष कसैलाई दिन्नँ। गुनासो पनि गर्दिनँ। यत्ति हो, हामी दुवै नितान्त अलग व्यक्ति थियौं। चुम्बकका एकै ध्रुवजस्ता। हामी एकअर्काका निम्ति बनेकै थिएनौं। किन मेरो छनौटमा सधैं गलत मान्छे नै पर्छरु
यो धागो चुँडिदा पनि म खुब छटपटाएकी थिएँ। इष्टमित्र र परिचितहरूका प्रश्नमय आँखा मेरा अगाडि तेर्सिएका थिए। मैले आफ्नो सम्बन्ध किन सम्हालेर राख्न सकिनँरु यस्तै प्रश्नले मेरो सुर्ता थपेको थियो।
परित्यक्त हुनुको डरले मलाई जिन्दगीभर लखेटिरह्यो। आफ्नै छायाले लखेटेजस्तो।
यसपालिको डर पहिलेभन्दा भयावह थियो।
मलाई जिन्दगीबाटै परित्यक्त हुनुपर्ला भन्ने डर थियो।
१० डिसेम्बर, २०१२
म न्यूयोर्कको मेमोरियल स्लोन केटेरिङ क्यान्सर सेन्टरमा थिएँ। बाहिरको तापक्रमभन्दा कयौं गुणा मेरो अन्तरआत्मा चिस्सिएको थियो।
म झ्यालतिर एकटक नियालिरहेकी थिएँ। तुसारोले सिसा भिजेका थिए। तुसारोको तगारो नाघेर बाहिरको न्यानो उज्यालोले मेरो चिसो शरीर छुन सकिरहेको थिएन। छोएको भए म पनि न्यानो हुन्थेँ कि !
त्यो पर्दापछाडि मनै हर्ने हिउँद थियो, जसको म कल्पना मात्र गर्न सक्थेँ। रूखका खिङरिङ्ग अस्थिपञ्जरहरू फुसफुसे हिउँको दोलाई ओढेर आफ्नो ओइलाएको रूप छोप्न खोज्दै थिए। चिसोले च्याखुरिएका पालुवा त्यही हिउँभित्र कतै एकमुठी सास जोगाएर बसेका होलान्। वसन्तको प्रतीक्षामा। जब घामको किरणले हिउँको पर्दा खोल्नेछ, र पालुवाहरू कठ्याङ्ग्रिएका चिम्सा आँखा उघार्दै फक्रनेछन्।
तुसारोको पर्दापछाडि क्रिसमस क्रिया सुरु भइसकेको थियो, जसको म कल्पना मात्र गर्न सक्थेँ।
केटाकेटीहरू लुला घाँसमाथि मृगझैं बुर्कुसी मार्दै होलान्। घरमा क्रिसमिस बोट रंगीचंगी प्रकाशले सजिँदै होला। चक्लेटको गुलियो माया साटिँदै होला। मायालुहरू अंगालोमा बेरिएर कहिल्यै नछुट्टिने बाचा–कसम दोहोर्याउँदै होलान्।
तुसारोको तगारोपछाडि माया, हर्ष र उल्लासको उत्सव सुरु भइसकेको थियो। म त्यसको कल्पना मात्र गर्न सक्थेँ।
मेरो कल्पनाको परिधि फराकिलो थियो। तर, जहाँबाट म त्यो परिधिको अन्तिम छेउ हेर्दै थिएँ, त्यहाँ घना अँध्यारोमा उत्सवले उकेरा हाल्नै पाएको थिएन।
म अस्पतालको कोठामा थिएँ। चारैतिरबाट एक्ली। भित्रैदेखि रित्ती। र, गहिरोसम्म चुँडिएकी।
बलिउड नक्षत्रकी एक चम्किली तारा थिएँ म। जिन्दगीका थुप्रै उफानहरूबाट गुज्रिँदै एकाएक अस्पतालको शैयामा उनिन पुगेकी थिएँ। कमजोर बिरामीका रूपमा। कसैगरी उफान पोखिएला र म जिन्दगीबाटै रित्तिउँला भन्ने डरले काम्दै।
म जति आँखा नचाउथेँ, मृत्यु मुख बाएर मैलाई घुरिरहेझैं लाग्थ्यो। के मेरो जीवित अस्तित्व निर्जीव आँकडामा सीमित हुँदै गइरहेको छरु
यस्तो प्रश्न दिमागमा झिलिक्क आउनेबित्तिकै म थर्रर काम्थेँ।
निख्खर सेतो दलिनमा आँखा टिकाउँदै म बर्बराउँथेँ। त्यो दलिन एकोहोरो मलाई हेरेको हेर्यै थियो। चुपचाप।
डरले हो कि छटपटीले, मेरो मुटु बाहिरैसम्म सुनिने गरी हल्लिँदै थियो। मानौं, त्यहाँ जीवन र मृत्युको लडाइँ चल्दैछ। आशा र निराशा घम्साघम्सी गर्दैछन्।
‘मनीषा, तिमी यो लडाइँ जितेर अगाडि बढ्नेछौ,’ आशा मलाई आश्वस्त पार्थी।
उतिन्खेरै मृत्यु आफ्नो फण उठाउँथ्यो, ‘तिमीलाई त पाठेघर क्यान्सर पो भएको छ मनीषा, त्यो पनि तेस्रो चरणको।’
‘यस्तो रोग लागेका ४४ प्रतिशत बिरामी बाँचेका छन्,’ आशा मुसुक्क हाँस्दै मलाई थुम्थुम्याउँथी।
उतिन्खेरै मृत्यु दारा देखाउँदै भन्थ्यो, ‘ढुक्क नहोऊ मनीषा, यस्तो रोग लागेका ५६ प्रतिशत बिरामी मरेका छन्।’
म आफूभित्रकै द्वन्द्व सहन नसकेर आँखा चिम्म गर्थेँ। एकअर्कासँग बाझिरहेका ती कर्कश स्वरहरू विस्तारै मत्थर हुँदै जान्थे। म आफूलाई शून्यतामा हराउँदै गएको पाउँथेँ।
जब जब मलाई यस्तै शून्यताको संसारमा हराउन मन लाग्छ, मेरो मन मेरै देशतिर बरालिन थाल्छ। ती हिउँले ढाकिएका हिमशृंखलाको झलकले मेरो आत्माका तारहरू झंकृत हुन थाल्छन्। चित्रकारले रङका थोपा तप्पतप्प क्यानभासमा चुहाएझैं जब अस्ताउँदो सूर्यको लालिमा ती हिमशृंखलामा पोखिन्छन्, मलाई आफूभित्र हराएका सारा रङहरू फेरि एकचोटि बौरिएझैं लाग्छ। निमेषभरकै लागि सही, त्यो अन्धकारमा पनि म आफूलाई रंगीन देख्छु।
जब जब मलाई आफैंभित्रको आनन्दमा डुब्न मन लाग्छ, मेरो मन मेरै काठमाडौंका ती साँघुरा नागबेली गल्लीहरूमा बरालिन थाल्छ। ती अँध्यारा गल्लीमा लहर मिलेका दाँतझैं एकनासे घर, घरको चिसो छिँडीबाट बाहिरसम्मै फैलिएको ओस, घरिघरि नाकमा ठोक्किन आउने रैथाने मसलाको बासना, तरकारीको झ्वाइँ, सिलौटाको आवाज, केटाकेटीको खैलाबैला र आफैं हराउने त्यो भिडभाडमा म बल्ल आफूलाई भेट्छु। घरि शिर निहुराउँदै, घरि कुम ठोक्दै चहार्नुपर्ने काठमाडौं गल्लीहरूले मलाई यहाँको कला, संस्कृति र प्राचीन इतिहाससँग परिचित गराउँछ। वर्तमानमा उभिएर उतिबेलाको समृद्ध सभ्यतातिर फर्किंदा यस्तो लाग्छ, म आँखा चिम्लेर ध्यानमा बसेकी छु र आफूभित्र आफैंलाई खोज्दैछु।
जब जब म आफैंसँग अतासिन्छु, मेरो मन मेरै शिवपुरी जंगल र काठमाडौं उपत्यका वरिपरिका पदमार्गहरूमा फन्को मार्न थाल्छ। आँखाले समेट्न नसक्ने हरियालीबीच मलाई आफ्नै ज्यान कपासझैं हलुंगो अनुभूति हुन्छ। मेरा पाइलाहरू पदचिह्न पछ्याउन थाल्छन्। ती मेरै पदचिह्न हुन्, मैले नै छाडेर आएको। आफ्नै पदचिह्न पछ्याउँदा यस्तो लाग्छ, मानौं म आफूभित्रको ‘म’लाई पछ्याउँदैछु। आफैंलाई खोज्दैछु। आफैंलाई चिन्दैछु।
यसले मलाई संसारमा कहीँ कतै नभेटिने आह्लाद प्राप्त हुन्छ।
केही समय भयो, मेरो काठमाडौंलाई आधुनिक संरचनाहरूले कुरुप पार्दै लगेको छ। त्यो देख्दा मन चसक्क बिझाउँछ, घाँसमाथि खाली खुट्टा हिँड्दा काँडा बिझेझैं। तै मलाई आज पनि यहाँ आउँदा आमाको काखमा लुपुक्क लुट्पुटिएझैं हुन्छ– सुखी, शान्त र निश्चिन्त।
मलाई सधैं यस्तो लाग्छ, शल्यक्रिया गर्न मेरो शरीर चिर्दा पनि मेरा नसाहरूमा नेपालको बागमती र भारतको गंगा आफ्नो पूरा उफानका साथ गड्गडाइरहेका भेटिनेछन्। मेरो जिन्दगी नै यी दुई सुन्दर देशका दुई पवित्र नदीहरूले सिँचित छ।
म नेपालको राजनीतिक परिवारमा जन्मेँ। कोइराला परिवारबाट धेरै जनाले विभिन्न कालखण्डमा नेपालको सत्ता सम्हाले। तै मैले भारतलाई आफ्नो कर्मभूमि बनाएँ। नेपालसँग मेरो अन्तरआत्माको जरा गाँसिएको छ। भारत भने मेरो छनौट हो, जहाँ मैले झांगिने अवसर पाएँ।
जादुई मुम्बई महानगरमा मैले आफ्नो सपना बाँचेकी छु। मैले असीभन्दा बढी फिल्ममा काम गरेँ। जिन्दगीमा ती सबै चिज हासिल गरेँ, जुन हासिल गर्छु भनी सोचेकी थिएँ। वा, यसो भनौं, सोचेकोभन्दा बढी नै पाएँ। यो सहरले मलाई आफ्नो समयमा बलिउडको उचाइमा पुर्यायो। केही वर्षको अन्तरालमा थुप्रै अवार्ड र सम्मानले विभूषित गर्यो। लाखौं–करोडौंको माया दियो। म यी सबैको निम्ति धन्य छु।
ती सुन्दर पल बाँचिरहँदा मलाई थाहा थिएन, मेरो यात्रा सहज छैन। विधिले मेरो मुटुको क्यानभास सफलताको खुसीले मात्र भर्ने छैन। ती सबै संवेदनाहरू पोख्न पनि उत्तिकै उदारता देखाउनेछ, जुन हामी जिन्दगीमा भोग्न नपरे हुन्थ्यो भन्ठान्छौं। हामीले ठानेर मात्र कहाँ हुन्छ ररु मेरो मुटुको क्यानभासमा असफल सम्बन्धले दिएको निराशा लेखियो। अनपेक्षित धोकाको पीडाले भरियो। अवसर खुम्चिँदै जाँदाको छटपटीले छोप्यो।
र, मलाई अन्तरआत्मासम्मै निचोरेर निराशाको रसातलमै पुर्याउने गरी आयो, यो रोगको पहिचान।
जसले मलाई एक्लै बर्बराउन बाध्य पार्यो– ‘म मर्न चाहन्नँ।’
अस्पतालको त्यो कोठाभित्र उच्चाट लाग्ने गरी क्वारक्वार्ती दलिन हेर्दै कति समय बित्यो मलाई थाहा छैन। जब ब्युँझिएँ, मेरो मुख प्याक्प्याक्ती सुकेको थियो। मैले चारैतिर आँखा डुलाएँ। म अघिको कोठामा थिइनँ। मलाई अस्पतालकै अर्कै कोठामा ल्याइएछ। त्यो अपरेसन कक्ष थिएन। न अपरेसनपछि राखिने कक्ष थियो।
मलाई आफ्नो मुटुको धड्कन थामिएझैं लाग्यो। त्यो टक्क अडिन्थ्यो होला, मैले उतिबेलै मेरी आमालाई कोठाभित्र छिरेको नदेखेकी भए।
आमाको उपस्थितिले नै मेरो फड्फडाइरहेको मुटुलाई सन्तोक दिइरहेको थियो। अब उहाँले मलाई सुखद खबर सुनाउनुहुनेछ१ म आशातीत नजरले उहाँलाई हेर्न थालेँ। तर, किन आमा आज मलाई देखेर पनि मुस्कुराउनु भएन ? किन उहाँ मेरो आँखासँग आफ्नो आँखा मिलाउन सक्नुभएको छैन ? उहाँको आँखामा किन म उही चमक देख्दिनँ, जुन मलाई देख्दा सधैं तैरिने गर्थ्यो ?
कहाँ छन् डा. डेनिस ची ? उही त हुन् मेरा रक्षक। आखिर के हुँदैछ यहाँ ?
त्यही बेला मैले डा. चीलाई कोठाभित्र छिर्दै गरेको देखेँ।
रोग पहिचान भएयता म अरूको अनुहार पढ्ने कलामा पोख्त भएकी छु। मेरा प्रियजनहरू अक्सर आफ्नो अनुहारमा झुटको नकाब लगाएर सत्य लुकाउन खोज्छन्। मलाई छल्न खोज्छन्। यो उनीहरूको मप्रति माया हो, मलाई थाहा छ। तर, मुखले जतिसुकै झुट बोले पनि आँखाको भावमा सत्य लुक्दैन। मान्छेको हाउभाउले हताश मनको छनक दिइहाल्छ।
यतिबेला पनि म अनुहार पढ्नमा एकोहोरिएकी थिएँ। मलाई हाँसोको आवरणभित्र लुकेको सत्य खुट्टयाउनु थियो।
मैले उनको आँखा पढ्ने कोशिश गरेँ। सकिनँ।
मैले उनको अभिव्यक्ति पढ्ने कोशिश गरेँ। सकिनँ।
उनी आफैंले एकै शब्दमा मेरो भविष्यको नतिजा सुनाइदिए। उनको बोली मेरो छातीमा तीरझैं रोपियो। चट्टानझैं कठोर सत्य बज्रिएर म थिलथिलो भएँ। यस्तो लाग्यो, मानौं छ फुट अग्लो बक्सरले एक्कासि आफ्नो शक्तिशाली मुक्का ममाथि बजारे।
मेरो हालत त्यो परीक्षार्थीको जस्तो थियो, जो परीक्षाको नतिजा सुनेर नित्र्यान्न परेको छ।
क्यान्सरले मलाई जितेको थियो।
म मर्दै थिएँ।
मध्यरात, म काठमाडौंको नर्भिक इन्टरनेसनल अस्पतालको सेतो चादर बिछ्याएको शैयामा लम्पसार थिएँ। एक्लै।
कोठामा मधुरो उज्यालो थियो। मेरो मनमा भने ज्वार उठेको थियो। म चिस्सिएकी थिएँ। एक्ली थिएँ। डराएकी थिएँ।
म किन यहाँ छुरु किन सडकको अर्कोपट्टि प्रसूति गृहमा छैनरु मलाई यहाँ प्रसूतिको निम्ति किन भर्ना गरिएनरु के म कुनै दिन मेरो आफ्नो बच्चालाई अंगालोमा च्याप्न सक्छुरु
यस्ता अनेक प्रश्न आगोको झिल्काझैं मेरो मनमा उठ्थ्यो।
जब मान्छेको मन आफ्नै विचारका तरंगहरूमा गुजुल्टिएर थकित हुन्छ, उसका आँखा दिनदिनै देखिने सामान्य दृश्यहरू पनि अचम्मसँग याद गर्न थाल्दा रहेछन्।
झ्यालबाट छिरेको चन्द्रमाको चाँदनीमा मैले आफ्नै कोठा नियालेँ। कस्तो सुग्घर१ कति व्यवस्थित१ यहाँ हरेक चिज कसरी ठीक–ठीक ठाउँमा राखिएको१ जुन चिज जहाँ हुनुपर्छ त्यहीँ१ एक इन्च तलमाथि छैन१
कोठामा छिर्दा पनि मैले ख्याल गरेकी थिएँ, अस्पतालको यो भाग निकै आकर्षक थियो। मलाई लाग्यो, यो अतिविशिष्ट ९भिआइपी० व्यक्तिहरूको निम्ति छुट्टयाइएको शाखा हो।
मलाई एकाएक आफ्नो परिचय उदांगिएको महशुस भयो। भरिन बाँकी ठूलो घाउको पाप्रा कसैले कोट्ट्याएर उक्काइदिएझैं।
मैले सयौंचोटि आफ्नो पेट सुम्सुम्याएँ। निकै समय भयो, मेरो पेट अप्रत्याशित रूपले फुलेको फुल्यै छ। त्यसैमाथि हल्का हात चलाउँदै मैले सुस्तरी सुस्केरा हालेँ। यति सुस्तरी, मेरो आफ्नै कानले धरि मेरो निश्वास चाल पाएन।
जुन घटनाक्रमले मलाई यो अस्पतालको शैयासम्म ल्याइपुर्यायो, त्यसको बाटो लामो समयदेखि खनिँदै रहेछ। त्यसको पदचाप मैले सुन्दै सुनिनँ।
मुम्बईमै हुँदा म केही महिनादेखि बिरामी महशुस गर्दै थिएँ। मेरो पेट सधैं डुम्डुम्ती फुलिरहेझैं हुन्थ्यो। मलाई देखेर मान्छेहरू हिजोकी खिरिली, चिरिचट्ट परेकी हिरोइन कस्तरी मोटाइछे भनेर कुरा काट्न थालेका थिए। त्यो सुनेर म आत्तिन्थेँ। उनीहरूको कुरा सही पनि थियो। जत्ति कोशिश गर्दा पनि म आफ्नो तौल नियन्त्रण गर्नै सकिरहेकी थिइनँ। खासगरी पेटको वरिपरि मासु भरिएर मलाई आफू मोटाइरहेको आभास हुन्थ्यो।
मैले तौल नियन्त्रण गर्न खुब कसरत गरेँ। दिनहुँ जिम गएर चिटचिट पसिना बगाउँथेँ। मलाई त्यति बेला मेरो पेटमा अथाह बोसो भरिएको छ भन्ने भान थियो। त्यसबाट मुक्ति पाउन मैले कुनै कसर छाडिनँ। केही समयमै नतिजा पनि देखियो। मेरो तौल घट्दै गयो। मेरो शरीरका सबै अंगहरूबाट अनावश्यक मासु निख्रिँदै गए। पेट भने जस्ताको तस्तै रह्यो। घट्नुको साटो बढ्ने क्रम जारी थियो। आफ्नै शरीरको बिग्रँदो बनोट देखेर म भित्रभित्रै दुःखी थिएँ।
व्यायामले पनि पेटको बोसो घटाउन नसकेपछि म दिक्क मान्दै डाक्टरको सल्लाह लिन थालेँ। मुम्बईका धेरै डाक्टरकहाँ उपचार गर्न गएँ। शरीरको पूरै जाँचपड्ताल गराउने तयारीमा पनि थिएँ। त्यही बेला मलाई काठमाडौं जानुपर्यो।
प्रशंसकहरूका आँखामा युवा र आकर्षक देखिनुपर्ने कलाकारहरू उमेर छिप्पिँदै जाँदा ऐना हेर्न डराउँछन्। उनीहरूलाई बुढ्यौलीले चाउरी पर्न थालेका आफ्नै अनुहारदेखि आफैंलाई डर लाग्न थाल्छ। म पनि आफूलाई बुढ्यौलीले छुँदै गएको स्वीकार गर्न थालेकी थिएँ। चालीसकी जो भइसकेकी थिएँ।
तीन महिनाअघि म मुम्बईको सिद्धिविनायक मन्दिर गएकी थिएँ। पूजापाठ गरेँ। मन्त्र जपेँ। बढेको तौल र पुटुक्क उक्सेको पेटबाट छुट्कारा पाउन भाकल पनि लिएँ– अर्को तीन महिनासम्म म अन्न खाने छैन। माछामासु र जाँडरक्सी त छुँदै छुन्न। साधुहरू यसैगरी उपवास बस्छन् भन्ने मैले सुनेकी थिएँ। म आफ्नो कमजोरीबाट त्राण पाउन जुनसुकै बाटो अपनाउन तयार थिएँ।
त्यसैबीच नोभेम्बर २०१२ मा म काठमाडौं उडेँ।
त्यो मेरो निम्ति एक अविश्मरणीय दिन थियो। मेरो साथीकी बहिनीको विवाह हुँदै थियो। मैले जुन स्वअनुशासनबाट आफूलाई बाँधेर राखेकी थिएँ, त्यसलाई तोड्ने उपयुक्त अवसर अर्को हुनै सक्थेन। आज फर्केर हेर्दा सम्झन्छु, त्यो मलाई गिजोलेर बसेको रोग खुट्टिनुभन्दा दुई दिनअगाडिको कुरा थियो।
जिन्दगीमा अगाडि कस्तो दृश्य पटाक्षेप हुँदैछ भन्नेबाट बेखबर म उत्सवको रौनकमा रंगिएकी थिएँ। मेरा सबै साथीहरू पिउँदै थिए। खुसी मनाउँदै थिए। म पनि एक गिलास वाइन पिएर त्यो खुसीमा सामेल भएँ। उतिन्खेरै मलाई आफ्नो पेट फेरि डुम्म फुलेझैं लाग्यो। माछामासु, जाँडरक्सी र अन्नबाट परहेज रहने स्वअनुशासन पनि निष्प्रभावी बनेको देखेर म निराश भएँ।
पार्टी सकेर म आफ्नो कारमा घर फर्कंदै थिए। पेटमा एकैचोटि लाखौं सुई घोचेजस्तो अथाह पीडा भएर आयो। काठमाडौंका उबडखाबड सडकले जतिचोटि गाडीका पाङ्ग्रा उफार्थ्यो, मेरो मुखबाट असह्य पीडाको चित्कार छुट्थ्यो।
त्यो पूरा रात मैले घोप्टो सुतेर काटेँ। दुखाइ कतिविधि थियो भने, म कोल्टे फेर्न पनि सक्दिनथेँ। मलाई त्यस्तो के भइरहेको थियो ? म आफैंसँग भुत्भुतिएँ। रनभुल्ल परेँ। डरले जीउभरि काँडा उम्रिए।
भोलिपल्ट बिहानै मैले आफ्नो भाइ सिद्धार्थसँग कुराकानी गरेँ। ऊसँग कुरा गर्दा मेरो आवाज कामेको थियो। मेरो अनुहारभरि छटपटीका रेखाहरू छरिएका थिए।
‘म अब यो पीडा सहन सक्दिनँ। मलाई यो के भइरहेको छ, पत्ता लगाउनुछ।’
भाइले तुरुन्तै मलाई अस्पताल लग्यो।
अनि, म यहाँ आइपुगेँ। नर्भिक अस्पतालको यो कोठामा। डाक्टरको प्रतीक्षा गर्दै।
त्यो बेला मेरो टाउको यस्तो भारी भइरहेको थियो, मानौं मेरो पूरै शरीरको भार मेरो टाउकोमा थुप्रिएको छ।
त्यो बिहान जब डा। मधु घिमिरेले मेरो परीक्षण गरे, मलाई सास फिरेजस्तो भयो। अब उनी भन्नेछन्, ‘सामान्य संक्रमण हो मनीषा, चिन्ता लिनुपर्दैन। केही दिनमै ठीक हुन्छ।’
त्यसपछि म यो पीडाबाट मुक्त भएर शिवपुरी जंगल र काठमाडौं उपत्यका वरिपरिका पदमार्गहरूमा फन्को मार्न पुग्नेछु। त्यहाँ आँखाले समेट्न नसक्ने हरियालीबीच मलाई आफ्नै ज्यान कपासझैं हलुंगो अनुभूति हुनेछ।
मैले मनभित्रै आफूलाई लागेको रोगको तानाबाना पनि बुन्न थालिसकेकी थिएँ। सोचेकी थिएँ, कलेजो संक्रमण होला। यसै पनि म तीन महिनाको स्वअनुशासनमा बस्नुअघि कयौं महिनादेखि दिनको एक बोतल वाइन पिउँथेँ।
डाक्टरलाई भने मेरो तानाबानाले तानेन। उनीहरू मेरो पेटकै परीक्षण गर्न थाले।
‘तपाईंको पेटमा धेरै तरल पदार्थ जमेको छ, यसलाई झिकेर परीक्षण गर्नुपर्छ,’ डा. घिमिरेले भने।
उनले सुई झिके। सुई देख्नेबित्तिकै मेरो जीउ कक्रक्क पर्यो। उनले त्यसको वास्तै नगरी पेटमा रोपे। पेटभित्र जमेको तरलको थोरै अंश विस्तारै सुईमा सर्यो। उनले त्यो नमूना ‘बायोप्सी’ निम्ति पठाउने बताए।
यति जाँचपछि घर जान पाइएला भन्ने सोचेकी थिएँ। पाइनँ। मेरो सिटीस्क्यान भोलिपल्ट बिहानलाई तोकिएको थियो। त्यो रात मैले नर्भिकमै काट्नुपर्ने भयो।
रातभर अस्पतालको बसाइले म अधीर भएँ। धैर्य त्यसै पनि मेरो स्वभावमै छैन।
भोलिपल्ट मलाई ह्विलचेयरमा गुडाउँदै सिटीस्क्यान निम्ति लगियो। त्यसपछि फेरि सुरु भयो एउटा अन्त्यहीन पर्खाइ। मेरो खाली, तर व्यग्र दिमाग फेरि अनेक तानाबाना खेलाउन थाल्यो।
मलाई कलेजोकै कुनै गम्भीर रोग लागेको रहेछ भने के गर्नेरु त्योभन्दा पनि भयानक अर्थोकै केही भएको रहेछ भने के गर्नेरु हे परमात्मा, तिमी मेरो पुकार सुन्दैछौ ? मलाई स्वस्थ बनाइदेऊ !
त्यो पर्खाइको बीचमा मैले सयौंचोटि नर्सलाई सोधेँ, ‘डा. घिमिरे कहाँ हुनुहुन्छरु उहाँ कहिले आउनुहुन्छ ?’
नर्सले पनि सयौंचोटि मलाई जवाफ दिइन्, ‘उहाँ व्यस्त हुनुहुन्छ। जतिसक्दो छिटो आउनुहुनेछ।’
म बिहानैदेखि उहाँलाई पर्खेर बसेकी थिएँ। बिहान तन्केर दिउँसो भयो। दिउँसो पनि तन्किन थाल्यो। सूर्यका किरणहरू डाँडापछाडि छोपिँदै गए। अब चाँडै यी किरणहरू अलप हुनेछन्। मलाई यो समय दिनभरिमै सबभन्दा नाटकीय लाग्छ। यस्तो लाग्छ, मानौं धर्तीमा कुनै डरलाग्दो दृश्यको निम्ति मञ्च तयार हुँदैछ।
म झन् झन् अधीर हुँदै गएँ।
किन कोही पनि केही समाचार लिएर आइरहेका छैनन्रु मेरो पेटबाट निकालिएको त्यो तरल बयोप्सीको निम्ति पठाइएको होइन र ?
साँझ आफ्ना दुवै हात फैलाएर दिनको उज्यालोलाई आफूभित्र समेट्न खोज्दै थियो। त्यही बेला मेरो परिवारका सदस्यहरू एक–एक गर्दै कोठाभित्र छिरे– मेरा आमाबुबा, सिद्धार्थ, मेरी काकी, काका र मेरा अरू भाइ–बहिनीहरू।
अचम्म ! यिनीहरू किन यस्तरी हुल बाँधेर मलाई हेर्न आए ?
मेरो मनको एउटा भाग थर्कमान भयो। मैले थकान, छटपटाहट र तनावले गलेको स्वरमा सुस्तरी सोधेँ, ‘के भयोरु तिमीहरू मलाई किन केही भन्दैनौरु’
मेरा अचम्भित आँखाहरू डा. घिमिरेमा गएर अडिए। उनी मेरो परिवारका सदस्यहरूको भिडमा पछाडि उभिएका थिए। उनी त्यहाँबाट विस्तारै अगाडि सरेर मेरो नजिक आए। उनी यति विस्तारै पाइला चाल्दै थिए, मानौं एक–एक पाइला गन्दै छन्। मैले उनका आँखा चम्किला देखेँ। के उनका आँखामा आँसु टिल्पिलाएको होरु कि, त्यो दिनभरिको थकानको असर हो ?
उनले आँखामा चस्मा लगाएका थिएनन्। उनको पावरवाला चम्मा कालो डोरीमा उनिएर घाँटीमा झुन्डिएको थियो। हातमा केही कागजपत्रहरू च्यापेका थिए। एउटा फाइल पनि थियो, जसका पन्नाहरू धेरैचोटि ओल्टाइपल्टाइ गरेझैं देखिन्थे।
म उनलाई एकटक हेरिरहेँ।
उनी एकछिन मूर्तिवत् उभिए।
विस्तारै मैले उनको ओठ चलमलाएको महशुस गरेँ।
के उनी बोल्न खोज्दैछन्रु धन्न !
कृपया केही त बोल्नू डाक्टररु के भएको छ मलाई, केही त भनिदिनू ?
‘मनीषा, अचेल यस्तो कुराको उपचार हुन्छ।’
लामो समय लगाएर उनले जे बोले, त्यसले झन् मलाई मुटुमै काँडा बिझेजस्तो भयो।
‘उपचाररु तपाईं कस्तो उपचारको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ ?’ मैले आफ्नो भासिएको स्वर अलिकति उचालेर सोधेँ।
म त्यसै पनि व्याकुल थिएँ। शरीरभित्र पसिनाका करोडौं ग्रन्थीहरू एकैचोटि फुट्न लागेझैं चिटचिट भइरहेको थियो। मैले घाँटीमा खैरो स्कार्फ बेरेकी थिएँ। मलाई त्यो स्कार्फले सास घाँटीमै अड्केझैं भयो। हातले स्कार्फ तानेर गाँठो खुकुलो पारेँ।
‘समय पहिलेजस्तो छैन। विज्ञानले धेरै तरक्की गरिसक्यो। अचेल यस्तोमा धेरै राम्रो उपचार हुन थालेको छ। मान्छेहरू लामो समय बाँच्न थालेका छन्,’ उनले अझै कुरा चपाए।
‘तपाईं के कुरा गर्दै हुनुहुन्छ डाक्टर ? कुन उपचारको बारेमा भन्दै हुनुहुन्छ ?’ मैले उस्तै व्यग्रतासाथ सोधेँ।
डा. घिमिरे एकछिन मौन रहे। उनी भित्रैदेखि आफ्नो शक्ति खिचेर मुखमा ल्याउँदै थिए, सायद।
‘मनीषा, तिमीलाई क्यान्सर भएको छ !’
‘क्यान्सररु’ मैले एक–एक अक्षर तौलँदै उच्चारण गरेँ। यस्तो लाग्यो, कोठाभित्र मेरो आवाज थर्किंदैछ।
‘मलाई कसरी क्यान्सर हुन सक्छ ? ’
मैले यो प्रश्न यस्तरी सोधेँ, मानौं यो रोग अरूलाई लाग्न सक्ला, मलाई कसरी लाग्न सक्छरु म स्वस्थ छु। पोसिलो खान्छु। आहारविहारमा ध्यान पुर्याउँछु। केही समयदेखि त माछामासु र जाँडरक्सी बारेको पनि छु। होइन, होइन। कहीँ कतै कसैबाट गल्ती भएको हुनसक्छ ! यो मलाई लाग्ने खालको रोगै होइन !
मेरो मनको तर्कना भंग गर्दै डा. घिमिरेले उस्तै सुस्तरी भने, ‘पाठेघरको क्यान्सर, अन्तिम चरणको।’
उनको बोलीसँग मेरो कानले तालमेल मिलाउन सकिरहेको थिएन।
म भन्दै थिएँ, ‘त्यसो हो भने किन तपाईं यसलाई काटेर फाल्दिनुहुन्न ?’
मैले धेरैचोटि यस्तै अवस्था फिल्ममा देखेकी थिएँ। फिल्ममा पाठेघर क्यान्सर हुँदा महिला शरीरको त्यो अंग सरक्क काटेर फालेको देखेकी थिएँ। मलाई वास्तविक जीवनमा पनि यो त्यत्तिकै सरल छ भन्ने लाग्दै थियो।
मेरी काकी स्त्रीरोग विशेषज्ञ हुनुहुन्छ। केही समयअघि उहाँले पुटुक्क उठेको पेट हेर्दै भन्नुभएको थियो, ‘मनीषा, कतै तिमी गर्भवती त भएकी छैनौ ?’
मैले उहाँलाई भनेकी थिएँ, ‘यो सम्भव छैन।’
त्यही गर्भ रहने पाठेघर मैले चटक्क चुँडालेर फाल्ने कुरा गर्दा डा. घिमिरेले प्रस्ट, तर पराजित शैलीमा भने, ‘कति काट्नु ? कहाँसम्म काट्नु ? क्यान्सर जताततै फैलिसक्यो।’
डा। घिमिरे त्यसपछि मलाई आगामी उपचार विधि बताउन थाले। संसारमै क्यान्सरको उत्कृष्ट उपचार हुने अमेरिका जान सल्लाह दिए। मेरो मस्तिष्कले भने उनका कुनै पनि कुरासँग तालमेल मिलाउन सकिरहेको थिएन।
त्यतिबेला उनले के–के भने, केही पनि सुनिनँ। त्यो क्षण पूरै कोठा फन्फनी रिंगिँदै थियो। मेरो पैतालामुनिको जमिन भासिँदै थियो। म शून्यमा घरि तैरिँदै थिएँ, घरि डुब्दै थिएँ।
त्यो एकदमै अनौठो क्षण थियो।
त्यसपछिको समय कसरी बिते, मलाई केही हेक्का छैन। म एकोहोरो भित्तातिर टोलाइरहेँ। मेरो परिवारका सदस्यहरू एक–एक गर्दै आउँथे। चुपचाप मेरो काँधमा हात राख्थे। र, चुपचाप हराउँथे। मानौं, सबैको आवाज हराएको छ। सबै निःशब्द भएका छन्। उनीहरू आफ्नो मायालु स्पर्शले खाली यति जताउन खोज्दै थिए, मनीषा तिमी एक्ली छैनौ, हामी तिम्रो साथ छौं।
त्यो मेरो जिन्दगीकै सबभन्दा लामो र एक्लो कहालीलाग्दो रात थियो।
भोलिपल्ट बिहान अघिल्लो दिन लाएको लुगाधरि नफेरी नर्भिक अस्पतालबाट घर फर्केकी त्यो मनीषा, अर्कै मनीषा थिई– अस्तव्यस्त र छिन्नभिन्न। मैले गाढा निलो रङको ट्रयाक र सेतो टिसर्ट लगाएकी थिएँ। मेरो पहिरन जतासुकै खुम्चिएका थिए।
म त्यो बेला बलिउड स्टार मनीषा कोइरालाजस्तो बिल्कुलै देखिएकी थिइनँ। तर, मलाई त्यसको कुनै वास्ता थिएन।
मैले आफ्ना आँखा हतार–हतार सनग्लासभित्र लुकाएँ। बिहानको तेजिलो घामको प्रकाश छेकियो। त्योभन्दा बढी संसारको आँखाबाट मेरो वास्तविकता लुक्यो।
बाटोभरि कोही बोलेनन्। खाली गाडीको घर्रघर्र आवाज आइरह्यो।
अनि, मेरो अन्तरआत्माको आवाज, जुन एकोहोरो भन्दै थियो– म मर्न चाहन्नँ।
‘मनीषा, तिमी मुम्बईमा घर किन।’
शाहरुख खान मलाई सधैं भन्ने गर्थे, ‘आफ्नै घर किनेर बस्यौ भने मात्र मुम्बई तिमीलाई आफ्नै जस्तो लाग्नेछ।’
सन् १९९१ मा सुभाष घईको ‘सौदागर’ बाट बलिउडमा प्रवेश गरेपछि मैले संख्यात्मक रूपमा थोरै काम गरेँ हुँला। तर, तीमध्ये केही काम गुणात्मक रूपले उत्कृष्ट थिए।
१९४२– अ लव स्टोरी, अकेले हम अकेले तुम, बम्बे, अग्निसाक्षी, खामोशी– द म्युजिकल, गुप्त, दिल से, मन – यी यस्ता फिल्म हुन् जसले बक्स अफिसमा मात्र धूम मच्चाएनन्, मेरो अभिनयको पनि खुबै तारिफ भयो। आज पनि बलिउडका उत्कृष्ट फिल्मको नाम लिँदा यीमध्ये केही छुट्दैनन्।
माया नगरीमा स्थापित भइसक्दा पनि मैले मुम्बईमा घर किनेकी थिइनँ। शाहरुखको भाषामा भन्दा, मुम्बईले मलाई आफ्नो बनाइसकेको थियो, तर मैले नै मुम्बईलाई आफ्नो बनाएकी थिइनँ। मैले अपार्टमेन्ट भाडामा लिएकी थिएँ। मुम्बई आएदेखि म भाडाकै घरमा बस्दै आएकी थिएँ।
लामो फिल्म करिअरबाट मैले राम्रै पैसा जम्मा गरेकी थिएँ। केका लागि जम्मा गरेकी थिएँ, त्यो थाहा छैन।
शाहरुख भन्ने गर्थे, ‘मुम्बईमा आफ्नै घर किनेपछि बल्ल मलाई यहाँ जरो गाडेको अनुभूति हुनेछ। यायावरझैं एक ठाउँबाट अर्को ठाउँ भौंतारिने मान्छे होइन, एउटा स्थायी ठाउँमा स्थापित भएझैं लाग्नेछ।’
म उनको कुरा मुसुक्क हाँसेर टारिदिन्थेँ।
मलाई थाहा थियो, कुनै पनि घरमा त्यस्तो शक्ति छैन, जसले मलाई कुनै पनि ठाउँमा स्थायी रूपले बाँधेर राख्न सकोस्। म अन्तरआत्मादेखि नै यायावर प्रकृतिकै छु। मेरो यो स्वभाव म कसैगरी बदल्न सक्दिनँ।
शाहरुख आफैं पनि मुम्बईका होइनन्। करिअर पछ्याउँदै दिल्लीबाट आएका हुन्, जसरी म नेपालबाट आएँ।
गहिरिएर सोच्दा मलाई के लाग्छ भने, म कतै न कतै, कुनै न कुनै रूपमा जरो उखेलिएर यहाँ आइपुगेकी छु। म आफ्नो सामर्थ्यले भ्याएसम्म राम्रो काम गर्दै थिएँ। आफ्नो उत्कृष्ट कला पस्कँदै थिएँ। तर, लामो समयदेखि यहीँ रहँदाबस्दा पनि मलाई कहिल्यै मुम्बई आफ्नो लागेन। म यहीँको हुँ, यो विचार मेरो दिमागमा आउँदै आएन।
तै मैले शाहरुखको सुझाव मान्ने निधो गरेँ। सन् १९९९ मा मुम्बईमा घर किनेँ। मैले मुम्बईलाई आफ्नो घर बनाएँ।
मुम्बई सहर कहिल्यै सुत्दैन।
म पनि त जागै थिएँ। कोशौं कोश परसम्म निद्राको नामनिसान थिएन।
म आफ्नो पहिलो घर काठमाडौंमा रोग खुट्टिएपछि दोस्रो घर मुम्बई आएकी थिएँ। पीडाले मेरो मुटु दुखिरहेको थियो। मलाई डरले छपक्क छोपेको थियो।
त्यो बेला म र आमा दुई जना मात्र मुम्बई आएका थियौं। परिवारका अरू सदस्य भोलिपल्ट आउँदै थिए। हामी दुई जनाको निम्ति त्यो उडान एउटा विन्दुबाट अर्को विन्दुसम्मको यात्रा मात्र थिएन। अँध्यारोबाट हामी उडेका थियौं, उज्यालोको खोजीमा थियौं। उडानभरि मेरो ध्यान डा. सुरेश आड्वानीसँगको भेटमा केन्द्रित थियो। उनी भारतका एक उत्कृष्ट क्यान्सर विशेषज्ञ हुन्। मैले अघिल्लो दिनै उनीसँग फोनमा कुरा गरेर समय लिएकी थिएँ।
जहाजमा पनि म देख्थेँ, मान्छेहरू मैलाई हेरिरहेका छन्। कसैका आँखामा भय नाचेको छ त कसैकामा सहानुभूति उर्लिएको छ।
मेरो जिन्दगीको यो रहस्य यिनीहरूले कसरी चाल पाए ?
म उनीहरूको सहानुभूतिपूर्ण हेराइले झनै तर्सिन्थेँ। छेउमा आमा हुनुहुन्थ्यो। भित्रभित्रै आँसु निलेर मुखमा मधुरो हाँसो छर्न खोज्दै हुनुहुन्थ्यो। सायद, उहाँलाई डर थियो म डराउँला कि भन्ने। उहाँलाई सुर्ता थियो, मैले सुर्ता लिउँला कि भन्ने। आमा न हो !
मलाई उहाँको खुबै माया लाग्यो। आमाको काखमा उसको बच्चाको मृत्यु– यो भावीको नियमित विधान त हुँदै होइन। कसरी सम्हाल्छन् होला ती आमाहरू आफूलाई ? कसरी सम्हाल्नुहोला मेरी आमा आफूलाई ?म आफ्नो भय र तनाव हड्डीहरूमा समेत महशुस गर्दै थिएँ। लुला भएका थिए मेरा हातगोडा